Newbie Bilood 7 2 todobaad ka hor #1546
Kaliya ku soo noqoshada jilitaanka duulimaadka kadib sanado badan maqnaa. My nooc ugu dambeeyay waxay ahayd 2005 oo leh MS2004. Dhowaan waan bilaabay fsx Aniga oo ku neefsanaya oo aan ku raaxeysanayaa barashada xarkaha mar kale. Waxyaabaha si isdaba joog ah iskama beddelin mahad-celin, marka laga reebo teknolojiyadda kombiyuutarka. Maalmihii hore mid ayaa ku riyooday 20fps iyo 500mb oo wan ah! Marka halkan ayaan joogaa, oo leh PC dhaqsi badan ..... gelitaanka internetka 24 / 24 iyo waqti badan gacmahayga. Waxaan rajeynayaa in qaar ka mid ah su'aalaheyga mustaqbalka aysan u muuqan doonin kuwo doqon ah!
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Camila Santis
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.151